1. လှပသောရောင်စုံသကြားလုံး အရသာပေါသော ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဒါပေမဲ့သူတို့အတူတကွပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါ၊ လူများစွာက၎င်းသည်ခက်ခဲသည်ဟုထင်ကောင်းထင်သောမီနူးတစ်ခု။ စွန့်စားမှုများမပြုလုပ်လိုကြပါ သို့သော်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ၊ လိုနှင့်ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး ကလေးတွေဟာပျင်းစရာမလိုဘဲထပ်မံစားရန်နှင့်စားသောက်ရန်လိုအပ်သောအချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အတူတကွပျော်စရာအတူလာကြ။ မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်သည့် fudge ပြုလုပ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အတူတူပါပဲတကယ်တော့အပြင်ဘက်ရှိကြည်လင်ပြတ်သားသည့်အပြင်အဆင်နှင့်အတွင်းပိုင်းနူးညံ့သော fudge အချိုပွဲ ချောကလက်နှင့်နို့အရောအနှောနှင့်အတူ အချိုပွဲ၏ texture, fudge texture ၏အသွင်အပြင်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်သည် ဤသည်ကသင့်အားနူးညံ့ချောမွေ့သောအရသာရှိစေပြီးအရသာရှိသောချောကလက်အရသာနှင့်စစ်မှန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတို့ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အပြင်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမရှိပါ။ ကလေးတွေဟာအချစ်ဆုံးနဲ့အချစ်ဆုံးအချိုပွဲတစ်ခုပါ။ ပြီးနောက်, ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ကြကုန်အံ့။ ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ဒါပေမယ့်အရသာထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။
2. Fudge ကဘယ်လိုအချိုပွဲမျိုးလဲ။ ချိုချဉ်သောနို့ရည် ၁ ဘူး (၁၄ အောင်စ)
3. နို့ချောကလက်ချစ်ပ် ၃ ခွက်
5. ladle ပန်းကန်ခွက်ယောက်
7. Freud စက္ကူ
8. နံ့သာမျိုး၊ အရသာရှိပြီးစေးကပ်သောအချိုပွဲမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်။ •ချိုမြိန်သောနို့ရည်ကိုပြင်ဆင်ထားသောပန်းကန်လုံးထဲသို့သွန်းလောင်းပါ။ •ထို့နောက်နို့ချောကလက်ကြော်များကိုပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ •ထို့နောက်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအတူတကွနှိုးဆော်ပါ။ မြင့်မားသောအပူပေါ်မိုက်ခရိုဝေ့၌ထား၏ ၁ မိနစ်ခန့်ကြာပါသည်။ •ပြင်ဆင်ထားသော pastry baki ထဲသို့ Freud စာရွက်ကိုခုတ်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖျန်းပြီးဆားအနည်းငယ်ကိုမွှေပေးပါ။ ဒါကြောင့်ချောကလက်ကလွယ်လွယ်ကူကူဖယ်ရှားနိုင်အောင် freud ကိုမကပ်မိစေဖို့။
9. •ထို့နောက်ချောကလက်ကိုပြင်ဆင်ထားသည့်ဒယ်အိုး (သို့) မှိုထဲသို့ထည့်ပါ။ မျက်နှာကိုချောချောမွေ့မွေ့သုတ်ရန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက်အအေးခံခြင်းကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့ ၂ နာရီခန့်လုံးလုံးအေးခဲသည်အထိထားပါ။
10. • ၂ နာရီကြာအေးခဲသည့်အခါမှိုမှဖယ်ထုတ်ပါ။ ထို့နောက်သကြားဓာတ်ဖြင့်သုတ်လိမ်းပါကစတုရန်းအရက်ဆိုင်များထဲသို့ဖြတ်ထုတ်ပါသို့မဟုတ်ကိုက်ခဲသောအပိုင်းအစများကိုခုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်သကြားအလွှာအနည်းငယ် မွှေးသောအရသာဖြစ်စေရန်, fudge ၏ထိပ်ပေါ်မှာထား။ Fudge ဆိုတာပါတီပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့ရေစာပါ။ ဒါကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားလို့ပဲ အထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူညစာစားပြီးနောက်သို့မဟုတ်ချိုသောပန်းကန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါကလွယ်ကူသောထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်နူးညံ့သောအရသာများအတွက်တက်ခူးနေသည် သို့မဟုတ်အချိုရည်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ချိန်အတွင်း guests ည့်သည်များကိုအစေခံရန် ထို့အပြင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်အစေ့တစ်ခုလုံး၊ အခွံမာသီးများသို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်များမှအရသာနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာများနှင့်ထူးခြားသည့်အဝေးတစ်နေရာသို့ပြုလုပ်ပါ၊ ထို့နောက် guests ည့်သည်များသို့မဟုတ်ပါတီပွဲများအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌အငွေ့ပျံအောင်လုပ်ပါ။